IBhodi yeeRhuluneli i-Pegasus Airlines nguSihlalo omtsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IBhodi yeeRhuluneli i-Pegasus Airlines nguSihlalo omtsha
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
UMehmet T. Nane, u-CEO wePegasus Airlines uba nguSihlalo omtsha weBhodi yeeRhuluneli ye-IATA ngoJuni 2022.
UMehmet T. Nane uyakusebenza njengoSihlalo wokuqala waseTurkey weBhodi yeRhafu ye-IATA.
Mehmet T. Nane uza kungena ezihlangwini zikaSihlalo weBhodi yeeRhuluneli uRobin Hayes.
UMehmet T. Nane uza kusebenza de kube kugqityiwe iNdibano yeZizwe eziManyeneyo ka-79 ngo-2023.
Mehmet T. Nane, uCEO wePegasus Airlines, uqeshiwe njengoSihlalo we IATA IBhodi yeRhuluneli e Umbutho waMazwe ngaMazwe wezothutho lomoyaINdibano Jikelele yama-77 yoNyaka, ukuqala kwakhe ukusebenza ngoJuni ka-2022. Mehmet T. Nane, oza kusebenza njengoSihlalo wokuqala waseTurkey weBhodi yeeRhuluneli ye-IATA, uzokuqalisa ixesha lakhe kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo yoNyaka engama-78 eza kubanjelwa eShanghai. nge-19 kuJuni ka-21, elandela uSihlalo weBhodi yeRhuluneli uRobin Hayes. UMehmet T. Nane uza kusebenza de kube kugqityiwe iNdibano yeZizwe eziManyeneyo ka-2022 ngo-79.
Ngolu nyulo, UMehmet T. Nane Uya kuba lilungu leKomiti yeSihlalo ye-IATA kwaye obu buLungu beKomiti kaSihlalo buza kuhlala iminyaka emithathu njengoSihlalo onyuliweyo, osebenzayo kunye nalowo wayesakuba nguSihlalo weBhodi yeeRhuluneli.
Ethetha ngokuqeshwa kwakhe, UMehmet T. Nane uthe: “Ndinebhongo kakhulu ngokuthatha indima ebalulekileyo. Esi sisalathiso esihle sokufika kweenqwelo moya zaseTurkey… ”kwaye uqhubeke wathi:“ Ishishini lokubhabha ngenqwelomoya, elixhasa amanye amacandelo ukongeza kwindima yalo ebalulekileyo, lihamba ngelona xesha linzima kwimbali yalo. Njengoko IATA, nto leyo namhlanje emele iipesenti ezingama-82 zezithuthi zomoya zizonke, ezilingana namalungu eenqwelo-moya angamalungu angama-290 avela kumazwe ayi-120, owona msebenzi mkhulu phambi kwethu kukusebenza ukuze ishishini lethu, eliqhuba uqoqosho lwehlabathi, libuyele kumanqanaba angaphambi kobhubhane njenge ngokukhawuleza kwaye kuqhubeka nokukhula okuzinzileyo. Ndiza kusebenza ngokungakhathali kwezi njongo. Siza kuwoyisa la maxesha anzima ngokudibanisa imikhosi yethu ”.
Umphathi omkhulu wePegasus Airlines, UMehmet T. Nane, obesebenza njengoSihlalo weKomiti yoPhicotho-zincwadi ye-IATA ngexesha elidlulileyo, uyaqhubeka nokuba lilungu leBhodi yeeRhuluneli ye-IATA okoko wabekwa e-2019.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) ngumbutho wabarhwebi beenqwelo moya zehlabathi ezasekwa ngo-1945. Ngokubandakanya ngo-2016 iinqwelo-moya ezingama-290, ikakhulu iziphathamandla ezinkulu, ezimele amazwe ali-117, amalungu eenqwelo moya eIATA angamalungu eenqwelo moya athwala malunga neepesenti ezingama-82 zesitokhwe seemayile zomoya. IATA ixhasa imisebenzi yenqwelomoya kwaye inceda ekuqulunqeni umgaqo-nkqubo kunye nemigangatho yomzi mveliso. Ikwikomkhulu laseCanada kwisixeko saseMontréal, sineeofisi zesigqeba eGeneva, eSwitzerland.